Dabinka: Caqli badan, Qalabaynta Aaladda Iswada | Martech Zone
Dabinku wuxuu ka ilaaliyaa kanaalkaaga waxyaabo cusub oo soo jiidasho leh saacad walba. Sumaddaadu waxay la socotaa dhagaystayaashaada, meel kasta oo ay aadaan. Dabinku wuxuu ku siinayaa aalado aad ku daaweyso waxyaabo tayo sare leh oo soo jiidasho leh oo ka yimaada hareeraha Webka iyo kaydkaaga asalka ah ee asalka ah ee ka ilaalin doona dhagaystayaashaada inay ku soo noqdaan wax badan. Xarunta Hubinta Mawduucyada 'Trapit Content Curation Center' waxay isticmaashaa sirdoon farsameysan oo casri ah si ay otomaatig ugu noqoto daahfurka iyo shakhsiyeynta warbaahinta iyo waxyaabaha ka socda Webka si loo kordhiyo loona taageero sheekada sumaddaada.
Dabinku wuxuu awood kuu siinayaa inaad dhisto oo aad maamusho aruurinta firfircoon ee soo jiidashada leh mawduucyada aad ugu habboon dhegeystayaashaada adoo adeegsanaya hal interface fudud oo lagu daabacayo barnaamijyada, emaylka, shabakadaha bulshada ama bogagga waqtiga dhabta ah ama jadwalka.
Sidee Dabinku u Shaqeeyaa
Baro - Ka soo qaad maktabadda weligeed sii kordheysa ee Trapit ee in ka badan 100,000 oo ilo khabiir lagu hubiyey ah, ama ku dar ilahaaga waxyaabaha aad ka kooban tahay isku darka. Laga soo bilaabo qoraalada baloogyada iyo maqaallada wargeysyada si loo soo bandhigo ama fiidiyowyo, Trapit wuxuu ogaadaa ma aha oo kaliya waxyaabaha ugu caansan, laakiin kuwa qarsoon ee qarsoon ee ku lumay qaska.
dabin - Qeex waxyaabaha ku habboon dhegeystayaashaada - oo ku dheji - waqtiga dhabta ah. Dabinku wuxuu wax ka bartaa waxa ugu muhiimsan dhagaystayaashaada oo wuxuu hagaajiyaa adoo waafajinaya oo sifeeya xulashada waxyaabaha ku habboon. Xitaa waad ku kala shaandheyn kartaa natiijooyinka ereyada muhiimka ah, tayada, calaamadaha iyo xitaa goobta, adoo hubinaya kaliya waxyaabaha ugu habboon ee la soo bandhigo.
samatabbixi - Trapit wuxuu u qaybiyaa waxyaabahaan - si otomaatig ah - warbaahinta bulshada, joornaalada emaylka, codsiyada moobaylka, boggaga internetka - meelkasta oo dhagaystayaashaadu doortaan inay isticmaalaan waxyaabaha. Adiga ayaa go'aaminaya goobta ugu fiican - iyo aaladaha ugu fiican - Trapit ayaa qaban doona inta hartay
Trapit wuxuu bixin doonaa websaydho toddobaadle ah oo aad iska diiwaan gelin karto oo aad arki karto bannaanbaxyada. hadda iska diiwaan!
Tags: sirdoonka macmalmaadooyinka la isku qurxiyogaarsiinta waxyaabahaMuuqaal koobangaarsiiso waxyaabahasirdoonkadabinla hubiyay
Hagaha Warbaahinta Bulshada ee Xirfadlayaasha Dhaqaalaha